Olee otú ige ntị YouTube online, offline na software
YouTube bụ otu nke kasị mma weebụsaịtị nke ụwa na-enye ihe karịrị ihe a onye ọrụ na-atụ anya na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na akụkụ kasị mma nke a website bụ na e nwere ọtụtụ iri puku online ngwaọrụ nke eme ka o kwe n'ihi na onye ọrụ na-eme ka n'aka na videos na-abụghị nanị ebudatara ma na-ele mgbe ke offline mode. Ọ enwekwu ume na usability nke website na ihe niile ndị ọzọ weebụsaịtị ọ dị ezigbo mkpa na-eme ka YouTube dị ka a ndabere ebe nbudata videos na ndị ọzọ na stof dị ka ọ na-ahuta ka otu nke kasị mma na nke kasị pụrụ ịdabere na weebụsaịtị nke ụwa. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na website nwere nnọọ ngwa ngwa mmelite sava nke na-eme n'aka na ọdịnaya na uploaded maka echiche dị ka anya ka e kpochasịrị niile mbipụta. Ọ na-ejikarị na-ewe nkeji na n'ókè-atụle okwu ahụ bụ na YouTube nwere niile ọhụrụ collection nke na fim, egwú na ndị ọzọ na omume dị ka ihe a onye ọrụ nwere ike dị nnọọ iche na nke. Pịnye aha n'ime search mmanya na-ahapụ ndị fọdụrụ ka website dị ka ọ ga-ekwe ka onye ọrụ iji na-enweta nsonaazụ kacha mma na ọ fọrọ nke nta 97% ikpe chọrọ video ma ọ bụ n'ihi bụ amịpụtara na a okwu nke nkeji. Nke a na omimi nkuzi e dere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a na-ọkọkpọhi videos keere ma online na offline mode. The Filiks na-ezie nnọọ mfe iso ma ka a nkuzi ga-ahụ na ha na-kọwara na enyemaka nke screenshots mere na onye ọrụ mgbe ọkọkpọhi ambiguous na nke a na-akawanye ọrụ mere n'ime a okwu nke nkeji:
1. Olee na-ege ntị YouTube online
2. Olee otú ige ntị YouTube offline
3. Na-ege ntị YouTube na TunesGo
Olee otú ige ntị YouTube online
Ọ bụ ezie na usoro a dị nnọọ mfe ma n'ụzọ kwụ ọtọ ka onye ọrụ ga-arụpụta ihe kasị mma na nke a dị ka screenshots nakwa na e agbakwunyere n'ime. Iji nweta ihe kasị mma ọ na-gwara nile ọrụ na-eso usoro na e kwuru ebe a nke mere na ha na-ke omimi ihe ọmụma na nwere ike mepụta usoro ọbụna mgbe a na nkuzi na-adịghị na-anya:
Onye ọrụ kwesịrị ka gara na saịtị ie www.youtube.com ka ịnweta homepage nke website:
Onye ọrụ mgbe ahụ mkpa ijide n'aka na na n'ime search mmanya aha nke song ma ọ bụ video na-stuffed iji jide n'aka na ihe ahụ na-abịa elu mfe:
The pụta bụ mgbe ahụ ka-achọ iji jide n'aka na mkpa song ma ọ bụ video na-emi odude na mgbe ahụ pịrị na-egwu. Nke a atọ nzọụkwụ usoro dị mfe na-eso na onye ọrụ mgbe niile ọkọkpọhi kasị mma pụta dị ka YouTube bụ ihe kasị mma na kasị gara na saịtị ahụ na planet. Usoro a nke na-ege ntị YouTube videos online ga-emekwa ka n'aka na ọrụ na-ọmụma banyere-adịbeghị anya uploads na yiri ọmụma banyere ọwa ha tụrụ ụtụ.
Olee otú ige ntị YouTube offline (Iji software)
The kasị mma usoro na-enweta videos nke YouTube mgbe ọ dịghị internet Njikọta bụ site n'ịhụ na vidio na-ebudatara. Nke a na-anọghị n'ịntanetị echiche ga-emekwa ka n'aka na ọrụ adịghị nwere ileta isi saịtị na mgbe nwere iji internet maka nkwanye ma ọ bụ buffering vidio. Nzube nke YouTube bụ ịrụ ụka adịghị nkwanye ma ndị ọzọ na weebụsaịtị na software omume nye ọrụ na owuwu iji jide n'aka na ndị ọkacha mmasị videos na-ebudatara maka ọdịnihu echiche dị ka mma. Ọ bụghị a mere ntụrụndụ website dị ka ọ na-enye ohere ọkachamara ga-esi jide ha chọrọ isiokwu ndị dị ka vidiyo na ọ bụla isiokwu nke ụwa nwere ike na YouTube enweghị ihe ọ bụla nsogbu. Iji nweta nsonaazụ kacha mma usoro nke nbudata video site RTMPDump ga-kọwara mere na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a na-akawanye ọkaibe ụlọ ọrụ na-enweghị okodu ọbụna otu penny. Usoro nwekwara e agbakwunyere na mkpa foto iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye a doo anya ihe ga-ọ na-eme na nke a:
The ngwá ọrụ kit nke usoro ihe omume nwere ike ibudata site na website nke software. Alternatively onye ọrụ nwekwara ike ime ka n'aka na Google search engine na-eji ibudata usoro mgbe ọ na-e-achọgharị:
Usoro ihe omume ebudatara na ụdị nke a zip faịlụ nke mere onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na zip faịlụ na-ahụ amịpụtara n'ihu n'ihu na nke a:
Ozugbo mmịpụta e mere na zuru ọ na-gwara iji jide n'aka na software omume na-agba ọsọ nke mere na ọ na-amalite na-arụ ọrụ.
The video nke YouTube a ga-ebudatara bụ na-egwuri mgbe usoro ihe omume arụ ọrụ na ndabere:
Onye ọrụ ga-ahụ ihe omume guzosie ike a njikọ site a iwu ozugbo na dị ka gụgharia a mere na video na-ebudatara site a omume nke ga-eme ka usoro-agwụ Ozugbo video e ebudatara.
The video ga-ahụ ga-echekwara ka chọrọ ọnọdụ dị ka kwa onye ọrụ ezi uche na o kwesịrị ime n'aka na ọ na-egwuri na iji kwesịrị ekwesị ọkpụkpọ na e arụnyere na kọmputa, ka ihe ndị ọzọ n'ọnụ na ọ bụ-ahụ kwuru na VLC media ọkpụkpọ na-atụ aro ka ọ na-ekere niile formats na ala na izu okè.
Na-ege ntị YouTube na TunesGo
The TunesGo eme ka o kwe onye ọrụ na-eme ka n'aka na YouTube video ebudatara na kwukwara ka usoro ihe omume enweghị ihe ọ bụla nke. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ndị na-esonụ bụ usoro:
Usoro ihe omume a ga-ebudatara ma wụnye si www.wondershare.com/tunesgo/ n'ihu n'ihu na nke a:
Ihe kwesịrị ekwesị ụzọ a na-ahụ ga-esochi iji jide n'aka na-esonụ na peeji-egosi. The ụzọ bụ homepage> YouTube ka iTunes:
The YouTube URL a na-ahụ na-pasted iji jide n'aka na na video preview-egosi na mgbe ahụ download button bụ na-enwe na-usoro mere:
> Resource> YouTube> Olee na-ege ntị YouTube Online, anọghị n'ịntanetị na Software